माछापुच्छ्रे बैङ्कले जारी गर्‍यो तीन अर्बको ऋणपत्र
माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडले एक हजार रुपैयाँ दरका तीस लाख कित्ता ऋणपत्र यही असार ३१ गते बिहीबारदेखि जारी गरेको छ। वार्षिक ८.५० प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदर सहित बैङ्कले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको हो।
नविल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ लिमिटेड बिक्री प्रबन्धक रहेको माछापुच्छ्रे ऋणपत्र २०८७ को कुल निष्कासित ३० लाख इकाईमध्ये १२ लाख कित्ता अर्थात् कुल रु. १ अरब २० करोड ऋण पुँजी रकम (५ प्रतिशत ६०,००० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लगानी कोषका लागि छुट्ट्याइएको) सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक निष्कासनबाट बिक्री गरिने छ।
बाँकी १८ लाख कित्ता अर्थात् कुल रु. १ अर्ब ८० करोड ऋणपूँजी रकम विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बैङ्कले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ता आवेदन गर्न सक्ने पनि जनाइएको छ।
बैङ्कको ऋणपत्र निष्कासन छिटोमा साउन ४ गते निष्कासन बन्द हुनेछ भने ढिलोमा साउन १७ गतेसम्म बन्द हुनेछ। माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडको ऋणपत्रले आइसीआरएएनपी–आईआर ‘ए’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ। आइसीआरए नेपालले प्रदान गर्ने उक्त रेटिङ्गले माछापुच्छ्रे बैङ्क लगानीका लागि जोखिममुक्त बैङ्क रहेको जनाउँछ।
बैङ्कको ऋणपत्रमा धितो पत्र बोर्डबाट आश्वास अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अलावा मेरो शेयर सफ्टवेयरबाट समेत आवेदन गर्न सकिने बैङ्कले जनाएको छ। माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर साथै हिमालदेखि पहाड र तराई गरी सातै प्रदेशमा आफ्ना १६१ वटा शाखाहरू र १६५ शाखारहित बैङ्किङ सेवा, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर समेत गरी जम्मा ३३१ स्थानबाट ९ लाख भन्दा बढी ग्राहकमा सम्पूर्ण बैङ्किङ सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। बैङ्कका देशभर २०२ वटा एटिएमहरू सञ्चालनमा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।